အင်ကြင်းသန့်: အမြဲတမ်းအတွက် ထာဝရအတွက်
Posted by အင်ကြင်းသန့် at 10:36 AM
ညီမရေ.... ပိုစ့်လေးကို ဖတ်ရင်း စိတ်မကောင်းလည်း ဖြစ်ရသလို သံဝေဂလည်း ရမိတယ်။ အမတို့ အလှည့်လည်း တချိန်မှာ ရောက်လာမှာပဲ လို့ပေ့ါ။ ပုံလေးနဲ့ သီချင်းလေးနဲ့ လိုက်သွားအောင် မြန်မာမှုပြုပြီး သန္တာဦး ဆိုထားတဲ့ စလည်ဝင်အိုးလေး ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးလိုပေ့ါ။း)
မမအင်ကြင်းလည်း...မမအဘိုးနဲ့အဘွားလို သားတသိုက် မြေးတသိုက်နဲ့ ဘ၀ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ထိ
good post for us..... I didn't see grandmother from my daddy side and grandfather form my mom side. My mother side grandmother was alot of control me everything. I very crossed eye to her when I was young :).... Now I miss her alot.. :(
Love is never end............
သိပ်ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ post လေးပါဘဲ
ဒီလို အဖိုးအဖွား ရဲ့မြေးဖြစ် ခဲ့တဲ့ ညီမ အင်ကြင်း အတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်နော်
ကောင်းလိုက်တာ ညီမလေးရယ်.. ဖတ်ရတာ ရင်ထဲကို စွဲသွားတာပါဘဲ.. ဒီလိုအချစ်မျိုးကို အားကျမိပါရဲ့..ရှိတော့ရှိတယ်...ရှားတယ် ဆိုတာမျိုးလို ဖြစ်နေပြီ.. ခုခေတ်လူတွေနဲ့စာရင် ရှေးခတ်ကလူတွေရဲ့ အချစ်က ပိုခိုင်မြဲတယ်လို့ ပြောရမယ်ထင်ပါရဲ့..ဒီနေ့ခေတ်မှာ အိမ်ထောင်ကွဲတာ ခနခနကြားရလွန်းလို့ အိမ်ထောင်ပြုဖို့ကို တွန့်ဆုတ်နေခဲ့မိတာပါ... ဒီလို စာမျိုးလေးတွေ ဖတ်မိတော့လဲ အားကျမိပါတယ်...
ကိန္နရီ ကိန္နရာ မောင်နှံလို ခိုင်မြဲ သစ္စာရှိတဲ့အချစ်မျိုးနဲ့ ချစ်တတ်ကြတဲ့ ညီမလေးအင်ကြင်းရဲ့အဘိုး နဲ့အဘွား တို့ လို အချစ်မျိုး ခုခေတ်ကြီးမှာ တကယ်ပဲ ရှာမှရှားပါ ....
ညီမလေးလည်း ဒီလို အချစ်မျိုးနဲ့ တွေ့ ရပါစေ လို့နော် ..... ။
( မတွေ့ ရင် တွေ့ အောင်ရှာပါ မသိုးထမင်း မသိုးဟင်း ပို့ ပေးလိုက်မယ် ..း))
ဒီနေ့မှပဲ ပိုစ့်လေးကို ဖတ်ရတော့တယ်.ပိုစ့်လေးကို ဖတ်ပြီး သဒ္ဓါ့ရဲ့ သိပ်ချစ်ရတဲ့ အဖိုးနဲ့အဖွားကို အရမ်းသတိရသွားတယ်။
တစ်ကယ်လို့ သူမအားရင်... အစ်ကိုရှယ်ချက်ပေးမယ်သိလား...း))
ရှေးလူကြီးတွေက သံယောဇဉ် ပိုတွယ်တတ် ကြသလိုပဲနော်...တယောက်ရှေ့ကဆုံးတာနဲ့ ကျန်တယောက်လည်း အင်အားမဲ့တော့တာ...အဲလို အဖြစ်တွေ တွေ့ဖူးတယ်...
အဖိုးနဲ့ အဖွား ဇာတ်လမ်းလေးကို ဖတ်ရတာ ကြည်နူးစရာပါဗျာ...
တကယ်ချစ်ကြတဲ့ သူတွေဟာ တသက်လုံးရိုးမြေကျ ပေါင်းဆုံနိုင်ကြတယ်...ဒါဟာလည်း သူတို့ရဲ့ ကတိသစ္စာ၊ သံယောဇဉ်၊ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်နားလည်ပေးနိုင်မှုကြောင့်လို့ ကျွန်တော်တော့ ထင်တယ်လေ...
ဟုတ်တယ်..အရင်းနှီးဆုံးတစ်စိမ်းနှစ်ဦးကို ချည်နှောင်ထားတာ အချစ်နဲ့ နားလည်မှုပဲ။ အဲင်္ဒီ နှစ်ခုမရှိရင် ကျန်တာတွေ ဘာမှ ဖြစ်မလာတော့ဘူး။ မအင်ကြင်းရဲ့ အဘိုးအဘွားတွေကို အားကျမိပါတယ်။
အားပါး..အမြဲတမ်းအတွက် ထာဝရအတွက်ဆိုပါလား။ တော်ပါပေတယ် ရေးထားတာ။ အဘိုးနဲ့ အဘွားလိုပဲ ဘ၀ရဲ့ နောက်ဆုံးချိန်ထိ ချစ်ခင်ကြင်နာစွာ ထာဝရလက်တွဲ ခိုင်မြဲနိုင်ကြပါစေ...။
မအင်ကြင်းကိုတော့ မငိုစေချင်ဘူးဗျ။ ငိုရင်းနဲ့ ပြုံးလိုက်ပါ :D
အင်ကြင်းရေ.. ပိုစ့်ကောင်းလေး ။ ဖတ်ရင်း စိတ်ထဲမှာ လိုက်ပြီး ခံစားရတယ်။ သီချင်းပါနားထောင်သွားတယ်နော့။
ဖတ်လို့ကောင်းအောင် ရေးတတ်တာ မဆိုးဘူး တော်တယ်ဗျာ... အားကျသွားပါတယ်..။ ဒီလိုရေးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားရဦးမယ်ဗျာ..။
ပျော်စရာကောင်းတဲ့ အချိန်တွေ ပြန်လည် ရရှိ ဦးမှာပါ..
ဒီလိုပါပဲ တွေ့လိုက်ဆုံလိုက် ကွဲလိုက်တြနဲ့ ..
မတည်မြဲခြင်းတွေ က တည်မြဲရင်း အုတ်မြစ်ခိုင်ခိုင်ချထထားကြလေပါရဲ့ဗျာ...
(ပြည်သူ ပြည်သား ချင်းမို့ အားပေးပါတယ်..ဆက်လက်အောင်မြင်ပါစေခင်ဗျာ)
ညီမလေး အင်ကြင်းရေ။ တခါမှ အလည်မလာ ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ဒီတခါ အလည်ရောက်လာပြီး ရေးထားတဲ့ ပိုစ့်အဟောင်းတွေပါ ၀င်ဖတ်သွားပါတယ်။အင်ကြင်း ကစာဖတ်နာသူတယောက် ဖြစ်ပြီး အရေးအသား ကလည်း ဆွဲဆောင်မှု ရှိပါတယ်။ခံစားချက်နဲ့စာသားအသုံးအနှုန်းတွေကို သဘောကျပါတယ်။ပြီးတော့ ဖေဖေ အောင်လံသား၊ မေမေ ပြည်သူ အဖြစ်ချင်းတွေ တိုက်ဆိုင်နေလို့ ခင်မင်ပါကြောင်းနှင့် နောင်လည်း လာရောက်လည်ပတ်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း...။